संसक्ति व्यवस्थाका दृष्टिले नासो कथाको विश्लेषण (समीक्षा) – Chitwan Post
यस लेखमा गुरूप्रसाद मैनालीको ‘नासो’ कथालाई व्याकरणिक संसक्तिको आधारमा हेरिएको छ । व्याकरणिक संसक्तिले यस कथाको सङ्कथनलाई एकअर्कामा संसक्त तुल्याएका छ । व्याकरणिक सङ्कथनको सैद्धान्तिक आधारमा ‘नासो’ कथाको विश्लेषण गरिएको छ ।
शब्दकुञ्ज : सङ्कथन, प्रतिज्ञप्ति, अप्रतिज्ञप्ति, संसक्ति, व्याकरणिक, कोशीय ।
गुरूप्रसाद मैनाली (१९५७–२०२८) नेपाली साहित्यका प्रथम आधुनिक कथाकार हुन् । उनको शारदा पत्रिकामा विसं १९७२ मा प्रकाशित ‘नासो’ कथाबाट नेपाली कथा साहित्यमा आधुनिक कालको शुभारम्भ भएको हो । थोरै कथा लेखेर धेरै ख्याति, चर्चा र सम्मान पाउने मैनालीका एघारवटा कथाहरु नासो (२०२०) मा सङ्कलित भएको पाइन्छ । उनले माध्यमिक कालीन कथा लेखनका तिलस्मी, जासुसी आदि प्रवृत्तिहरुलाई परित्याग गरी सामाजिक यथार्थवादी कथा लेखेर नेपाली कथालाई आधुनिकताको मूल्य प्रदान गरे । उनका कथाहरुमा सामाजिक मूल्य र मान्यता, पारिवारिक समस्या, आर्थिक द्वन्द्व आदि पक्षको सरल र प्रभावकारीरुपले चित्रण गरेको पाइन्छ ।
२) विश्लेषणको सैद्धान्तिक आधार
प्रायोगिक भाषाविज्ञानका क्षेत्रमा सन् १९६० को दशकपछि विकसित भएको सङ्कथन विश्लेषण अङ्ग्रेजीको ‘डिस्कोर्स एनालाइसिस’ पदावलीको नेपाली रुपान्तरण हो । अङ्ग्रेजी ‘डिस्कोर्स’ शब्दमा ‘एनालाइसिस’ जोडिँदा ‘डिस्कोर्स एनालाइसिस’ वा ‘सङ्कथन विश्लेषण’ पदावली निर्माण भएको पाइन्छ । ‘डिस्कोर्स’ शब्दको नेपाली रुपान्तरण गर्दा दौडनु, दौडिरहनु र अघि–पछि गर्दै दौडनु भन्ने हुन्छ । यस आधारमा ‘डिस्कोर्स’ शब्दको कोशीय अर्थ पनि भन्नु, बोल्नु, कुरा गर्नु वा बातचित गर्नु (कुरा वा बातचितका पछाडि दौडनु) भन्ने नै हुन्छ । तर, हिजोआज यसको विश्लेषणले कोशीय परिधिभन्दा परसम्मको अर्थ बुझाउने गरेको छ (घिमिरे, २०६९ : १) ।
सङ्कथन विश्लेषण भाषा निष्ठ अध्ययन हो । भाषामा केन्द्रित भएर नै यसले प्रदान गर्ने अर्थहरुको खोजी गरिन्छ । भाषाभन्दा बाहिर भएर भाषाले सङ्केत नै नगरेका अर्थहरुको खोजी गरिँदैन । पाठमा प्रयुक्त भाषाले जति अर्थ सन्दर्भहरुलाई तानेर ल्याउन सक्छ, त्यसको मात्र खोजी गरिन्छ । पाठमा प्रयुक्त भएको भाषा उपयुक्त संरचनामा मिलेको हुनुपर्छ । अर्थ पनि कार्यकारण शृङ्खलामा आएको हुनुपर्छ । सङ्कथन या पाठमा प्रयुक्त हुने भाषामा व्याकरणिक र कोशीय शब्दहरु आएका हुन्छन् (पौडेल र पोख्रेल, २०७१ : ११–१२) ।
सङ्कथनअन्तर्गत भाषिक प्रयोगमा खुला व्यवस्थासँगै भाषाको बन्द व्यवस्थाको पनि प्रयोग भएको हुन्छ । यसको खोजी पनि पाठ विश्लेषणका क्रममा नै गर्न सकिन्छ । बन्द भाषिक व्यवस्थाअन्तर्गत व्याकरणिक शब्दहरुको प्रयोग भएको हुन्छ । व्याकरणिक शब्दहरु पाठमा शून्य शब्दका रुपमा आएका हुन्छन् । यस्ता व्याकरणिक शब्दहरुले कुनै व्यक्ति, कार्य वा घटनाको विशिष्टतालाई सङ्केत गर्छन् । बन्द व्यवस्था भएका शब्दहरु कुनै पनि भाषा विशेषको नियममा आधारित हुने हुँदा यी खुला शब्दहरु झैँ अन्य भाषामा आउन सम्भव हुँदैन । यस्ता व्याकरणिक शब्दहरु कुनै पनि भाषाका काल, पक्ष, भाव, लिङ्ग, वचन, पुरूष, आदर, विभक्ति, कर्ता, कर्म, पूरक आदि विविध व्याकरणिक एकाइसँग सम्बन्धित हुन्छन् । यस्ता शब्दहरुले पाठको प्रकार्यलाई सङ्केत गर्ने हुँदा प्रकार्यपरक शब्द पनि भनिन्छ (पौडेल र पोख्रेल, पूर्ववत् : १२) । सङ्कथन विश्लेषणका विशेष पारिभाषिक शब्दावलीअनुसार व्याकरणिक शब्दहरुलाई ‘अप्रतिज्ञप्ति सूचक’ भन्ने गरिन्छ ।
कुनै विचार, भाव, वस्तु आदिको सङ्केतन प्रतिज्ञप्ति सूचकता हो । सङ्कथनको कुनै घटना, विषय र अवधारणाको कुनै निश्चित सन्दर्भबारे सूचना दिने खालका सङ्कथन एकाइलाई प्रतिज्ञप्ति सूचक एकाइ भनिन्छ (गौतम, २०६८ : ५७९–५८०) । यसका विपरीत अप्रतिज्ञप्ति सूचकहरु कुनै घटना, विषय र अवधारणाको कुनै निश्चित सन्दर्भलाई सूचित नगर्ने खालका हुन्छन् । नामयोगी, विभक्ति, निपातजस्ता व्याकरणिक शब्द र विभिन्न सन्दर्भलाई परस्परमा जोड्ने सापेक्ष तथा निरपेक्ष संयोजकजस्ता संयोगी शब्दहरु अप्रतिज्ञप्ति सूचक एकाइ हुन् (गौतम, पूर्ववत् : ५८०) ।
संसक्ति भनेको कुनै पनि पाठभित्र हुने अन्तर्सम्बन्ध हो, अनुच्छेदभित्रका वाक्यहरुमा भावप्रवाह सिर्जना गर्ने विशिष्ट ढाँचा हो । संसक्ति त्यस्तो रसायन हो जसले कुनै पाठभित्रका एकाइहरु (संवाद, मनोवाद, अनुच्छेद, वाक्य, उपवाक्य, पदावली आदि) लाई एकताबद्ध गर्दछ, सुसङ्गठित बनाउँदछ (गौतम, पूर्ववत् : ५७५–५७६) । संसक्ति व्याकरणिक र शाब्दिक वा कोशीय गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । व्याकरणिक संसक्तिअन्तर्गत निर्देशन (रेफरेन्स), सार्वनामिकि (प्रोनोमिनलाइजेसन), लोप वा विलोपन (एलिप्सिस वा डिलिसन), प्रतिस्थापन (सब्स्ट्यिुसन) र संयोजन (कन्ज्वाइनिङ्ग) हुन् । सङ्कथनमा एकै आर्थी सम्बन्धमा उनिएका संरचनाको खोजी भएका एकै प्रकृतिका शाब्दिक एकाइको शृङ्खलाको खोजी हो । यसलाई कोशीय वा शाब्दिक संसक्ति भनिन्छ (गौतम, पूर्ववत् : ५७९) ।
व्याकरणिक संसक्तिले कुनै पनि पाठमा प्रयुक्त भएको भाषाको बन्द व्यवस्थालाई जनाउँछ । कुनै पनि भाषामा रहेका कालिक र स्थानिक सर्वनाम, संयोजक, प्रतिस्थापन, लोप, निपात आदिलाई व्याकरणिक एकाइ वा कोटिअन्तर्गत राख्न सकिन्छ । कुनै पनि सङ्कथनलाई अर्थपूर्ण बनाउन ती त¤वहरुले मह¤वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । ती व्याकरणिक त¤वको आधारमा ‘नासो’ कथाको विश्लेषण गरिएको छ ।
३) ‘नासो’ कथामा व्याकरणिक संसक्ति
कुनै पनि सङ्कथनलाई अर्थपूर्ण बनाउन विभिन्न त¤वहरुले काम गरेका हुन्छन् । सङ्कथनलाई अर्थपूर्ण बनाउने त¤वमध्ये संसक्ति एउटा हो । संसक्तिलाई मूलतः दुई भागमा विभाजन गरी हेर्न सकिन्छ । ती दुई भागमा व्याकरणिक संसक्ति र कोशीय संसक्ति पर्दछन् । यिनीहरुमध्ये यहाँ व्याकरणिक संसक्तिको आधारमा ‘नासो’ कथालाई विश्लेषण गरिएको छ ः
निदर्शनको प्रयोगले कुनै पनि सङ्कथनलाई भावप्रवाहगत रुपमा संशक्त बनाएका हुन्छन् । अनुच्छेद वा पाठमा एक पदको पुनरावृत्तिको विकल्पमा प्रयोग हुने सर्वनाम पदहरुले निदर्शनको काम गर्ने हुनाले यसलाई सार्वनामिक संसक्ति पनि भनिन्छ । ‘नासो’ कथाका सन्दर्भमा यस्ता निदर्शनहरुको प्रयोग सुरूदेखि अन्त्यसम्म नै विभिन्न अवस्थामा आएका छन् ।
“विचरी सुभद्रा पनि खिन्न थिइन् । छिमेकका आइमाईले छोराछोरी खेलाएको देखेर उनलाई रहर लाग्यो ।”
प्रस्तुत सङ्कथनमा आएको ‘सुभद्रा’ पदको सट्टामा ‘उन’ शब्द आएको छ । जसका कारण कथाभित्रको कथन र सम्प्रेषणलाई प्रवाहित बनाएको छ । यसमा व्यक्तिवाचक सुभद्राको ठाउँमा सर्वनामको प्रयोगद्वारा भनाइलाई संसक्तियुक्त बनाएको छ ।
“फुपूलाई सरकारबाट एउटा हुन्डी बक्सेको रहेछ, त्यसबाट दुई जनाले गुजारा चलाएका छौँ ।”
प्रस्तुत सङ्कथन मा स्थानवाचक हुन्डी शब्दको सट्टामा त्यस सर्वनामको प्रयोग गरिएको छ । ‘नासो’ कथामा यस्ता स्थानवाचक शब्दका सट्टामा प्रयोग गरिएका निदर्शनहरु प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन । जसले पुनरावृत्तिको बोझलाई न्यूनीकरण गर्दै कथालाई संशक्त तुल्याएका छन् ।
पाठमा सन्दर्भगत अर्थ नबिग्रिने गरी कुनै पनि शब्द हराउने गर्छ । त्यो शब्द हराउँदा पनि प्रस्तुत पाठले प्रदान गर्ने अर्थमा फरक आउँदैन भने त्यो लोप संसक्ति हुन आउँछ । ‘नासो’ कथामा पनि यस्ता पदलोप धेरै भएका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि पाठ अझ अर्थपूर्ण तथा छरितो बन्न गएको देखिन्छ ।
“सानु ! तिम्रो ओछ्यान खोइ नि ?”
“पल्लो कोठामा छ ।”
“किन पल्लो कोठामा सारेको ?”
देवीरमण र सुभद्राबीचको यस संवादमा पहिलो पङ्क्तिमा आएको ओछ्यान शब्द पछिल्ला दुई पङ्क्तिमा लोप भएको छ । “पल्लो कोठामा छ ।” र “किन पल्लो कोठामा सारेकी ?” भन्ने सन्दर्भ ओछ्यानकै सन्दर्भमा आएको हुनाले यहाँ अर्थमा फरक आएको देखिँदैन । त्यसैले, केही शब्दको लोपले पनि सङ्कथनलाई संसक्तियुक्त बनाउँछन् । ‘नासो’ कथामा यस्ता शाब्दिक लोप धेरै ठाउँमा गरिए पनि सरल र प्रवाहपरक सङ्कथन देख्न सकिन्छ ।
पाठमा पुनरावृत्तिको बोझलाई कम गराई वा सङ्कथनलाई छरितो र अर्थपूर्ण बनाउनका निम्ति पदहरु प्रतिस्थापन गर्ने गरिन्छ । यस्तो प्रतिस्थापन पद, पदावली, वाक्य तथा वाक्य समूहका तहसम्म हुने गर्दछ । ‘नासो’ कथामा पनि ठाउँठाउँ विभिन्न तहमा प्रतिस्थापन भएको पाइन्छ ।
“देवीरमण मण्डपमा बसेका थिए । नयाँ दुलही पनि एकै आसनमा थिइन् । ब्राह्मणहरु ऋचा पढेर अग्निमा आहुति दिइरहेका थिए । प्रारब्धले यो उमेरमा उनलाई फेरि दुलाहा बनायो । एकदिन यस्तै रीतसँग उनले सुभद्राको पाणिग्रहण गरेथे ।”
प्रस्तुत सङ्कथनमा देवीरमण मण्डपमा बसेका, नयाँ दुलही पनि एकै आसनमा भएकी, ब्राह्मणहरुले ऋचा पढ्दै आहुति दिइरहेको सम्पूर्ण सन्दर्भका सट्टा पछिल्लो वाक्यमा यस्तै रीतसँग भन्ने पदावली आएको छ । जसले गर्दा वाक्यहरुको पुनरूक्तिलाई नियन्त्रित गरी छरितो तथा सुहाउँदो कथन प्रवाह भएको छ ।
संयोजनले भाषिक जोर्नीलाई आपसमा बाँध्ने काम गर्छ । कुनै पनि सङ्कथनमा आएका स्वतन्त्र कथनहरुलाई एकाकार गरी बाँध्ने काम संयोजकले गर्दछ । यस्ता संयोजकहरु विभिन्न किसिमका हुन्छन् । प्रस्तुत ‘नासो’ कथामा पनि विविध संयोजकहरुको प्रयोग गरी वाक्यहरुलाई सुगठित बनाउने काम भएको छ ।
“उनको एक्लै जाने विचार थियो, परन्तु गाउँका कैयन् बूढा–बूढी, विधवा स्वास्नीमानिसहरु पनि तयार भए ।”
प्रस्तुत सङ्कथनमा परन्तु संयोजकले निषेधात्मक सम्बन्धलाई जोडेको छ । देवीरमण एक्लै जाने विचार लिएका तथा गाउँमा कैयन् बूढा–बूढी, विधवा, स्वास्नीमानिसहरु तयार भएका दुईवटा अलग वाक्यलाई परन्तु शब्दले जोडी देवीरमणको विचारलाई निषेध गर्ने काम गरेको छ । आफ्नो विचारदेखि पछि हट्दैछन् भन्ने सङ्केत परन्तुले गरेको छ ।
जान ता सुभद्रा जान्थिन् कि जाँदैनथिन्, एक वचन सोधेकोसम्म भए उनको आँसु पुछिने थियो ।”
दोस्रो उदाहरणमा प्रस्तुत कि संयोजकले विपरीत अर्थ बुझाउने क्रियापदलाई जोडेको छ । सुभद्रा जान्छिन्, सुभद्रा जाँदैनथिन् भन्ने विपरीतार्थीले अलग सम्बन्ध जोडेको छ । यसरी विपरीत अर्थ दिने वाक्यहरुलाई कि संयोजकले जोडी अनिश्चय बुझाउने बनाएको छ । यसरी कुनै सङ्कथनमा आएका सामान्य देखिने संयोजकहरुले अनुच्छेदभित्र रहेका कथनहरुलाई प्रवाहमय बनाएका हुन्छन् ।
निपातले कुनै वाक्य वा त्यस वाक्यअन्तर्गतका विविध भाषिक एकाइमा आश्रित रही पाठमा प्रयुक्त भएको आशयलाई विशेष भावका साथ प्रस्तुत गर्न सघाउँछ । यसले पाठमा भएको विचारको निश्चय, आग्रह, स्वीकृति, बल आदि भाव थप गर्न सहयोग पु¥याएको हुन्छ ।
सुभद्राले मनमनले भनिन्– “तीर्थ–व्रत गर्न त मलाई पो लैजानु पथ्र्याे । मेरो को छ र, छोरा न छोरी !”
(पृ. ५) ।
प्रस्तुत सङ्कथनमा जेठी श्रीमती सुभद्राले छोरो पाएकी कान्छी श्रीमतीलाई तीर्थव्रत लगेको अवस्थामा भावलाई संसक्त तुल्याउन बढीभन्दा बढी निपात प्रयोग गरिएको छ । यसमा त, पो, र, को, न जस्ता निपात आएर सरल र सरस सङ्कथन प्रवाह भएकोले वाक्य संसक्तियुक्त भएको देखिन्छ ।
गुरूप्रसाद मैनालीद्वारा प्रकाशन गरिएको ‘नासो’ (कथासङ्ग्रह) मा व्याकरणिक संसक्तिको प्रयोग भएको छ । सङ्कथनमा संसक्तिलाई हेरिन्छ । संसक्तिले पाठभित्र हुने अन्तःसम्बन्धको कार्य गर्दछ । कुनै पनि पाठभित्रका एकाइहरु (संवाद, मनोवाद, अनुच्छेद, वाक्य, उपवाक्य, पदावली) लाई एकताबद्ध गर्दछ । संसक्ति सम्बन्धका लागि एकआपसमा जोड्ने संयोजीहरु (सङ्कथन शब्द) को आवश्यकता पर्दछ, जसबाट वाक्यहरु एकीकृतरुपमा संसक्त भएका हुन्छन् । संसक्तिका लागि संयोजी पद वा पदावलीहरु (सङ्कथन वा सङ्कथन पदावली) को प्रयोग भएको हुन्छ । यसमा मुख्य शब्द वा मुख्य विचार पुनरावृत्ति हुन्छ । यस्तो संसक्ति व्यवस्था दुई प्रकारका हुन्छन् ः व्याकरण संसक्ति र कोशीय वा शाब्दिक संसक्ति । व्याकरणिक संसक्तिगत युक्ति (ग्रामाटिकल कोहेसिव डिभाइस) र कोशीय वा शाब्दिक संसक्तियुक्ति (लेक्सिकल कोहेसिव डिभाइस) को अध्ययन पाठको आर्थी सम्बन्धको निक्र्यौलताका लागि गरिन्छ । जुन सङ्कथन विश्लेषणको केन्द्रीय विषय हो ।
त्यसैले, यसमा व्याकरणिक संसक्तिअन्तर्गत निर्देशन (रेफरेन्स), लोप (एलिप्सिस वा डिलिसन), प्रतिस्थापन (सब्सिस्ट्युसन), संयोजक (कन्ज्वाइनिङ) र कोशीय वा शाब्दिकअन्तर्गत संयोजी शब्द (निपात) को खोजी गरी पाठमा भएका एकाइहरुको अन्तःसम्बद्धता, अन्विति र संसक्तताको अध्ययन गरिएको छ ।
गौतम, देवीप्रसाद (२०६८), ध्वनि पद्धति र लय विधान, काठमाडौँ ः के.ए.सी. जर्नल ।
गौतम, देवीप्रसाद (२०६८),सङ्कथन विश्लेषण, रत्न बृहत् नेपाली समालोचना (सैद्धान्तिक), राजेन्द्र सुवेदी र लक्ष्मणप्रसाद गौतम (सम्पा.), काठमाडौँ ः रत्न पुस्तक भण्डार ।
घिमिरे, वासुदेव (२०६९), सङ्कथन विश्लेषण ः परिचय र पद्धति, काठमाडौँ ः इन्टेलेक्चुअल बुक प्यालेस ।
मैनाली, गुरूप्रसाद (२०५७), नासो (सोह्रौँ संस्क.), तानासर्मा (सम्पा.), काठमाडौँ ः अम्बिकाप्रसाद मैनाली ।
पौडेल, माधवप्रसाद र गोकुल पोख्रेल (२०७०), सङ्कथन विश्लेषण ः सिद्धान्त र प्रयोग, काठमाडौँ ः विद्यार्थी प्रकाशन प्रा.लि. ।